Sọpụrụ 4X, ndị a bụ echiche anyị | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | MWC, Noticias, Nyocha
Anyị enwetala ohere igosi gị nkọwa niile nke ụfọdụ ndị otu ọhụụ Huawei gbadoro ụkwụ na ahịa Europe. Yabụ, mgbe ị nyochachara Honor 6 Plus y Na-asọpụrụ 6, ugbu a bụ oge nke etiti nwanne nwoke nke ezinụlọ, ndị Nsọpụrụ 4X.
A ọnụ na ihe ndị magburu onwe anya na ihe karịrị ezuru oru e ji mara maka ihe ọ bụla nkezi ọrụ. Na nkenke, onye asọmpi siri ike maka ZTE Blade S6 kemgbe ọnụego ya gbanwere, euro 199, na eziokwu ahụ na ọ ga-abụ na Europe na-eme ka ọ bụrụ ngwaọrụ mara mma n'ezie. You ga-atụ uche nke anyị Sọpụrụ 4X nyochaa?
2 Ọnụ ahịa dị n'etiti etiti ọnụahịa mara mma
3 Sony EXMOR RS IMX214 igwefoto megapixel 13
Na nha nke 152.9 x 77.2 x 8.65 na ibu nke 170 gramMgbe anyị nwalere Honor 4X, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ọdụ dị mma ma nwee njikwa, n'agbanyeghị nha ihuenyo ya. Ngwongwo ya nke polycarbonate adịghị adịcha adị oke ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ụmụnne ya ndị okenye, ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ imetụ ya aka.
Na ala, ndị otu Huawei ejirila igwe okwu stereo rụọ ọrụ karịa ogo a na-anara nke ọma, ebe n'elu anyị na-ahụ ihe mmepụta iji jikọọ ekweisi. Akụkụ aka nri nke Honor 6 bụ ebe ha chọtara njikwa olu na igodo ike nke ekwentị.
Ọnụ ahịa dị n'etiti etiti ọnụahịa mara mma
The Honor 4X na-amalite site na ebumnuche doro anya: iji obi ọjọọ na-awakpo ahịa dị n'etiti. Na, n'agbanyeghị ọnụahịa ya, a ghaghi ịmata ya na njirimara teknụzụ nke phablet a na-atọ ụtọ. Anyị ga-amalite site na ikwu banyere gị Ihuenyo IPS nke 5.5 nke anụ ọhịa ahụ ruru mkpebi nke pikselụ 1280 x 720.
Ogo nke ihe oyiyi ahụ abụghị nke kachasị mma n'ahịa, a ghaghị iburu n'uche na ihuenyo ahụ ruru njupụta nke 267ppp, ọ bụ ezie na ọ ezughị ezu maka iji ya kwa ụbọchị. A na-akpụ obi mkpụrụ obi ya site na a HiSilicon Kirin 620 64-isi SoC na XNUMX-bit ije nke ruru ọsọ elekere nke 1.2 GHz ekele ya 8 Cortex A-53 cores, yana 2 GB nke RAM.
Nnukwu ma na anyị achọtala na ngwaọrụ a bụ ebe nchekwa ROM ya. N'agbanyeghị na naanị 8 GB nke nchekwa dị n'ime na-asọpụrụ 4X enweghị a Micro SD kaadị oghere otú ị ga-enwe ike mụbaa mmachi na ebe nchekwa na-abịa ọkọlọtọ ke Asia phablet.
Batrị bụ otu n’ime ike ekwentị a nwere. Ma ọ bụ nke nwere ikike nke 3.000 mAh, emeputa na-ekwe nkwa nnwere onwe nke oge 72. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na nyocha n'ọdịnihu, n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, anyị na-eche otu n'ime njikarịcha kachasị mma.
Sony EXMOR RS IMX214 igwefoto megapixel 13
Honor 4X jikọtara otu oghere ahụ Honor 6. Ihe mmetụta ya dị ike 214 megapixel Sony Exmor RS IMX13 ọ na-enye nanị nnukwu arụmọrụ. Nnwale ndị anyị gbabara enweghị ike ịbụ ihe na-enye afọ ojuju, na-egosipụta ngwa ngwa ngwa ahụ.
O di nwute, mgbe a bịara n'inwe macros, ọnụ ahụ na-enwe nsogbu nsogbu, ọ bụ ezie na ịnwe obere ndidi karịrị ezuru. Chetara gị 5 megapixel n'ihu igwefoto, ezigbo maka ndị hụrụ ihe osise onwe ha.
Ọnụ nke meworo ka anyị nwee mmetụta dị mma nke ọma na naanị otu nke anyị chọtara bụ obere nchekwa dị n'ime ngwaọrụ ahụ. Mana iburu n'uche na Honor 4X ga-erute n'ahịa Spanish na ịma mma ọnụahịa nke 199 euroEkwesiri ighota na Huawei tufuru ulo ulo na windo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MWC » Sọpụrụ 4X, ndị a bụ mmetụta anyị
en http://t.co/Dissn4sofU ha tinye ya ozugbo na 175 XNUMX
naanị 8Gb nke nchekwa dị n'ime ma enweghi ike ịgbasa - -> Njehie!
PanzerGlass, ihe nchebe kacha mma na ahịa